धितोपत्र बोर्डले ५१ कम्पनी लगानी गर्न असुरक्षित छन् भन्ने आशयको सुचना जारी गरेपछि चौतर्फी आलोचना, विज्ञ भन्छन्ः बोर्डले शेयर मार्केट तल झार्न खोजिरहेको छ
2021-06-15 10-06 | Hamro Biratnagar
विराटनगर, १ असार । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानी गर्न असुरक्षित छन् भन्ने आशयको ५१ कम्पनीको लिष्ट सार्वजनिक गरेसँगै चौतर्फी आलोचना सुरु भएपछि उक्त निर्णय सच्याएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको नियतमाथि नै शंका उब्जिएपछी बोर्डले यसबारे स्पष्टीकरण दिएको हो । सार्वजनिक गरिएका कम्पनीहरुमा चलखेल भयो भन्ने आशय बोर्डको नरहेको तर भाषा लेख्न राम्रोसँग नजान्दा धेरैलाई भ्रम परेको स्वीकार गरेको छ ।
तर, विज्ञहरुले धितोपत्र बोर्डको नियमाथिनै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले धितोपत्र बोर्ड स्वयंले शेयर बजारमा गिरावट ल्याउन चलखेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । हाम्रो विराटनगरसँग कुरा गर्दै एक विज्ञले भने,‘कहिँ नभएको जात्रा हाँडि गाउँमा भनेजस्तो त्यसरी कम्पनीको नाम तोक्न मिल्छ ? मेरा कम्पनी भएको भएचाहिँ मानहानी मुद्धा हाल्थे । गलत गरेको छ भने कारवाहीलगायत सवैथोक गर्न मिल्छ । नियामक निकायलाई नियमन गर्ने कसले ? केही थाहा नभएका व्यक्तिहरु कुर्सीमा बसेका छन् ।’ उनले भने,‘एकछिन अगाढी भन्छन यो यो कम्पनीम चलखेल भयो भनेर एकैछिन पछि भन्छन त्यो भन्न खोजेका होइनौँ । २ घण्टामा स्टेटमेन्ट चेन्ज भइसक्यो । यो के गर्न खोजेको ?’
उनले धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारमा गिरावट ल्यानका लागि विभिन्न चलखेल गरिरहेको बताए । ‘मार्केट झार्नका लागि विभिन्न अस्त्रहरु युज गरिरहेका छन् । अस्ति माइक्रो फाइनान्स मार्जिन ल्याण्डीङलाई १२० दिन देखि बढाएर १८० दिन बनाइदियो । त्यसपछि पनि बजार घटेन के गर्ने के गर्ने भनेर फेरी ट्याक्स बढाएर ५ बाट साढे ७ प्रतिशत पुर्यायो ।’ उनले भने,‘त्यसबाट पनि नघटेपछी धितोपत्रले आज ५१ वटा कम्पनीको नाम निकाले । यो ५१ बहेक अरुको मुल्य माथि तल भएको कम्पनी छैन ? यो कस्तो खाले अनुसन्धान हो ? भोलि कुनै व्यक्तिले यो यो कम्पनीको सुचना निकालिदिनु भन्यो भने त्यहि निकाल्देला भन्ने पो लागिरहेको छ मलाई ।’
उनले धितोपत्र बोर्डले यो कन्पनीमा चुनौती छ वा यसमा फाइदा छ भन्न नमिल्ने बताए । ‘आजको दिन लगानीकर्ताहरु सजग छन् । कतिको लेभलमा पोर्टफोलियो बस्छ भनेर आफै हेर्न सकिन्छ । जुवाको बजार तपाई आफैले खुलाउने अनि यसमा रिस्क भयो यो भयो भनेर भन्ने ?’ उनले भने,‘जसले लगानी गर्छ उसैले एनलाईसिस गर्ने हो नी । धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो गर्ने हो भने बन्द गर्नुस धितोपत्र बोर्ड । नियामक निकायले यो यो कम्पनी खराब छ, लगानी नगर्नुस भनेर भनेको छ कतै दुनियाँमा ? राम्रो भन्नुपर्नेमा यीनीहरुले मार्केट झार्न खोजिरहेका छन् ।
मंगलबार दिउँसो धितोपत्र बोर्डले लगानी गर्न असुरक्षित छन् भन्ने आशयको ५१ कम्पनीको लिष्ट सार्वजनिक गरेको थियो । तर त्यसको केही घण्टा नवित्दै बोर्डले सार्वजनिक गरिएका कम्पनीहरुमा चलखेल भयो भन्ने आशय आफ्नो नरहेको प्रष्टिकरण दिएको थियो ।